Jwxo-shiil iyo woyyane Wacad Baysumareen, Waxna Waan Aragnaa!! – Rasaasa News
Aug 5, 2009 Jwxo-shiil, Kilil5
Humaaga hagoogta hankoolada hoose, Siyaasi hamuumay halkuu wax ka doono dadkaaban hadayne, kolkuu huga qaato hagaaga banaysto hortiina istaago dad baa hadli doona, In uu ina heero gumaysigu hawsha hoostaasu ka wadaaye hareeraha eega,
hawd buu ku jiraadu huf aan jirin weeye, Da,abaa hafinaysa Dawuu ku hadlaaye naftiis ma halaago halkaasna ogaada hoos buu ku jiraaye.
Ilaahayow nin aan wax ogayn ha cadaabin, hadii uu wax ogaan waayana cadaab, daweynaha Somalida Ogadeeniyow mid ogaada, Jwxo-shiil waa sideetan jir, sonkor leh, dhiig kar leh oo dhoob dhoob ku ahaa magaalo, waxaan marna suurto gal ahayn in uu joogo dhulka Somalida Ogadeeniya. Ma dhicin intii uu Jwxo-shiil, Jwxo galay in uu gudaha Ogadeeniya 2 bilood toos u joogo isaga oo ka da,a yar, dhulku ka amaan badan yahay, dadku sidan iska jecel yahay Jabhaduna mid tahay.
Jwxo-shiil, qorshihii uu watay wuu dhamaystiray in yar baana uga hadhay, wax uu gudaha u galayna ma ahayn halgan Jwxo wax u tar ah, ee waxay ahayd maanta ayuu kuu dagmay dil Dr. Dolal oo laf dhuun gashay ku noqday Itobiya iyo isagaba. Jwxo-shiil maalintii uu gudaha galay Dolaal 10 maalmood ka dib waa la dilay, intaa ka horna wuxuu gudaha joogay Dr. Dolal 2 bilood oo xidhiidh ah.
Kolkii uu fuliyey Jwxo-shiil hawshaas xidh ma galin, waxaa u yeedhay saraakiisha Itobiya, Saraakiisha Itobiya waxba uma sheegaan maamulka degaanka Somalida, kaliya waxaa ay u sheegaan in ay dhibaato ku abuuraan dadweynaha. Waxaana sii laba jibaarantay dhibaatadii loo gaysanayey dadweynaha, waxaana la xidhay xuduuda iyada oo ay Itobiya aad uga cabsanayso Jabhad carcarteeda qabta oo aad isugu kalsoon oo sandihii ugu dambaysayba ka dagaalamaysay gudaha Ogadeeniya taageero weyna ka haysata Somaliweyn.
Waxaan kale oo aan waxba cidina u sheegin Jaaliyaadka dibadaha ee taageera Jwxo-shiil, oo qaarkoodba si ugu shaqeeyo Jwxo-shiil, qaar ah Qabiil ku Jabhad, Cuqdad ku Jabhad, shir ku Jabhad, Magac ku Jabhad, Qaaraan qayb hel ku Jabhad, Jaad ku Jabhad iyo Qaraabo ku Jabhad, ma jiraan wax alaale wax ay ka war hayaan waxay u bukaan maararow iyo hadal waana sidaas sida dhabta ah ee ay Jabhada ku yihiin.
Xoogaga aan waxaba ogayn ee qaarna la amro sida Kaalinka 5aad, qaarna jini ku xaqsayga ku shaqeeyo ee Jwxo-shiilo iyo Jwxo-shiilada oo la isku daray, waxay masuul ka yihiin dhibaatada haysata dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo in ay dalka ka guuraan mooyee aan dawo kale lahayn, looguna talo galay runtii in ay dalka iskaga guuraan.
Hadaba, Jwxo-shiil, rag yar oo Jwxo ah iyo saraakiisha Tigray ayaa waxay ka warhayaan arimaha socda ee lagu dhibaataynayo dadweynaha Somalida Ogadeeniya si loogu qanciyo in ay dhibaatada xanuunkeeda ku doorsadaan in ay isu dhiibaan Itobiya.
Kaalinka 5aad ee kuligiis dibada loo soo diray ee la yidhi la soo hadla dadweynaha Somalida Ogadeeniya, yaa ka soo horeeyey oo ay isku soo halaynayaan, ciil ayeyse dadweynuhu u qabaane ma wanaag bay kala kulmayaan. Jwxo-shiil dadweynaha uu ka dhuumanayo ee uu isku aamini waayey, in loo soo diro wiilal shaqaale u ah Itobiya oo aan awood lahayn, waa mid aan Jwxo-shiil iyo saraakiisha Itobiya waxba u keenaynin.
Waxaana cadaatay in dilkii Dr. Dolal ee ku Jwxo-shiil daba socdaa ay diidanaayeen, ay rumowday oo Itobiya ayna jirin cid ay kaga xadhig xidhanayso dibadaha iyada wax kasta ku samaysay dadweynaheenii.
Waxay saraakiisha Itobiya iyo Jwxo-shiilba, doonayaan bal in ay arkaan sida uu dadweynaha somalida Ogadeeniya ee dibadaha ku nooli, ay uga Jawaabaan socdaalka wiilasha Kaalinka 5aad. Hadii la soo dhaweeyo waftiga Kaalinka 5aad, waxay guul weyn u tahay Jwxo-shiil, waxaana soo degdegi talaabo cusub oo ka soo yeedha Itobiya, hadiise ay dadweynuhu diidaan in ay soo dhaweeyaan waftiga Kaalinka 5aad, waxay dhabar jab ku tahay Jwxo-shiil iyo saraakiisha Itobiya, waxayna saraakiisha Itobiya dib ugu noqon doonaan qorsheyaalkooda ay doonayeen in ay wax kaga qabtaan dhulka Somalida Ogadeeniya.
Ummada Somalida Ogadeeniya waa in ay Ogaataa, wiilashan Kaalinka 5aad ee la soo kadeeday in ay soo af gartaan dadweynaha qurba joogta ee ka soo jeeda dhulkan, in ay dabada ka riixayso talo laga helay Jwxo-shiil, hadii ay ku guulaysan waayaan wadnayaasha dadweynaha iyo hadii ay ku guulaystaanba kolay waa kuwii lumiya shaqooyinkooda kadeedka ah, waaba hadii ay ka nabad galaan dad la sugaya dambiyo ay ka galeen ummada gaar ahaana eheladooda joogta gudaha.
FG. waftiga ka socda Maamulka Kaalinka 5aad, waxay ku soo beegan yihiin Yurub Augusto 14, 2009